မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
21°58′0″N 96°11′0″E﻿ / ﻿21.96667°N 96.18333°E﻿ / 21.96667; 96.18333ကိုဩဒိနိတ်: 21°58′0″N 96°11′0″E﻿ / ﻿21.96667°N 96.18333°E﻿ / 21.96667; 96.18333
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (အင်္ဂလိပ်: University of Computer Studies, Mandalay; အတိုကောက် UCSM) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ဘာသာရပ်များအတွက် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့နှင့် မဟာဘွဲ့သင်တန်းများကို တက်ရောက်နိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ B.C.Sc., B.C.Sc. (Honours) M.C.Sc., M.A.Sc., M.I.Sc.
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ B.C.Tech., B.C.Tech. (Honours) M.C.Tech.
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ Dr. Sayne Lei Shwe. "Technology and State Development". Ministry of Science and Technology. Retrieved on 2008-12-07. Archived 10 June 2011 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 10 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UCSM။ SOI Asia။ 28 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2008-12-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nyi Nyi Aung (2003-02-24). "Joint degree for PhD in computer studies". The Myanmar Times. [လင့်ခ်သေ]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်&oldid=647499" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။